Toetr’andro: hivadika ho rivodoza ilay tangoron-drahona | NewsMada
Toetr’andro: hivadika ho rivodoza ilay tangoron-drahona
Omaly hariva, tany amin’ny 900km avaratra atsinanan’Antsiranana no misy ilay tangoron-drahona matevina. Noheverina hivadika ho rivodoza halina izy io. Tsy mbola mazava hatreto ny lalany, raha ny fanazavan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby. Miankina amin’ny fivoarany no mety handrafitra ny toetry ny andro, manomboka amin’ny alakamisy.
Araka izany, tsy mbola misy ny filazana loza fa entanina ny mponina ao amin’ny morontsiraka avaratry ny Nosy, manomboka ao Antalaha hatrany Besalampy, mba hanaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny fivoaran’io tangoron-drahona io.
Ahitana rindrin-drahona na “front” ihany koa ao atsimon’ny Nosy izay heverina fa hitondra orambe amin’iny faritra iny, amin’ny alakamisy izao. Hanomboka ho mafy kosa ny rivotra, rahampitso alarobia, any amin’ny morontsiraka atsimo, morontsirak’i Boeny ary any avaratra atsinanan’ny Nosy.